Author Topic: Galmada Xilliga Uurka (Jawaabo Muhiim Ah) (Read 227069 times)
« on: January 02, 2009, 10:04:50 PM »
Maalmahaan, dadku waxay si ka fudud si kasta oo hore uga hadlaan galmada. Si kasta ha ahaatee, dadku mararka qaarkood way ka weji gabxaan iney ka hadlaan galmada iyo uurka waxaana laga yaabaa iney dhibaato ka qabsato iney su'aalo ku saabsan galmada ula yimaadaan takhtarkooda ama kalkaalisadooda. Sidoo kale, haweenka iyo ragguba inta badan cabsidooda iyo dareemmadooda iyagaa isku qarsada.
Haddii kani uu yahay ilmahaagii ugu horreeyey, waxaa laga yaabaa inaadan ogaannin in uurku uu yahay waqti dareenkaaga badalmo uu adiga iyo aabbaha ilmaha isu kiin beddelo. Waxaa laga yaabaa inaad dareento daal, niyad kacsanaan, farxad, diiqo, rajo, cabsi, hooyonnimo iyo qurux, lur iyo soo jiidasho la'aan. Aabbuhu, dhinaca kale, waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu ku faano inuu ilmo aabbo u noqdo ama uu ka wel welo mas'uuliyado cusub.
Waxaa soo socda qaar ka mid ah jawaabaha su'aalaha ku saabsan galmada ee inta badan dhiba lammaaneyaasha ilmaha filanaya. Haddii aad su'aalo dheeraad ah qabtid, ama haddii aad dhibaato galmo aad qabtid waqtiga uurkaaga oo aadan adinku xallin karin, talo weydiiso takhaatiirteenna adigoo kala soo xiriira emailkaan help@somalidoc.com. Inkastoo, laga yaabo inaad u maleyso in su'aashaadu ay tahay mid nooc ah, dadka kale waxay dhab ahaantii qabaan walaac kaas la mid ah.
Haweenka qaarkoodna, xakamaynta dhalmadu waxay u ahayd carqalad, isla markaana waxaa laga yaabaa inuu uureysigu u yahay waqti xorriyad. Waqtiyo dhowr ah, haweenka qaarkood ayaa laga yaabaa iney dareemaan iney "luminayaan qaabkooda iyo sida ay u eg yihiin" waqtiga uurka.
Qaar ayaa laga yaabaa iney ka fogaadaan galmada, iyagoo dareemaya rabitaanka oo aad u yar. Kuwa kale ayaa laga yaabaa iney doonayaan galmada iney lammaanahooda uga helaan dib u xaqiijinta inuu weli jecel yahay waxayna u arkaan mid soo jiidasho leh.
Haddii aadan xiiso u haynin galmada, kala hadal lammaanahaaga. Waxaa laga yaabaa iney lammaanahaaga ku adag tahay inuu fahmo haddii aadan kala hadlin.
Suuragal ma ahan in ilmaha ku jira ilmo galeenka wax loogu dhimo galmo sameynta. Biyaha uu ilmuhu ku dhex sabbeynayo, xuubka biyaha celinaya, caloosha, derbiga uur ku jirta, iyo lafaha sinta ayaa ka shaqeeya iney ilmaha ka dhowraan in la dhaawaco.
Galmada waqtiga uurku maahan mid xanuun leh hadidi uusan xanuun kale jirin.
Dad ayaa ka cabsi qaba arintaan iyagoo aaminsan in caruurta wax u dhibayso haddii sidaan la sameeyo laakiin shahwo waxyeello uma lahan ilmaha.
Intee ugu badan ayey galmadu ammaan tahay (dhibaato keeni karin) waqtiga uurka?
Inta ugu badan ee aad galmo sameyso adiga ama ilmahaaga idin saameyn meyso, ilaa inaad qabto dhibaatooyin halistoodu sarreyso mooyaane laguuna sheegay inaadan galmo sameynin. Lammaaneyaashu waxay isu tagaan marar kala duwan waxayna xataa ku kala duwan yihiin bil ilaa bisha kale.
Galmada badanaa waa la oggol yahay inta uu uurku jiro oo dhan ilaa iyo dhowrka toddobaad ee ugu danbeeya. Takhaatiirta qaarkood waxay dareensan yihiin in waqtiga dhowrka toddobaad ee ugu danbeeya, galmadu laga yaabo iney keento xuub dillaac waqtigiisa ka soo hormara.
# Biyahaagu ay soo burqadaan ama galka biyuhu uu dillaaco.
# Uu dhiig hoostaada ka imaanayo.
# Aad xanuun xagga hoose aad ka dareento.
# Uu ilmo galeenku isku soo giigsamayo, isu soo ururayo ama fool waqtigeedii ka horreysa ku qabato
Haddii aan lahaa taariikh dhicis, weli galmo ma sii sameyn karaa?
Haddii aad lahayd uur dhicisoobay, waa inaadan galmo sameynin saddexda bilood ee ugu horreysa ee uurkaaga. Takhtarkaaga ayaa kuu sheegi doona inaadan raacin baabuur kac-kacaya ama inaadan ka qayb qaadan hawlo jir ahaaneed oo waaweyn ama jir dhis. Xannibaadahaan waxay mandheerta ka caawinayaan iney si ku filan ugu kobocdo si markaas uureysi guul leh uu dhaco.
Marmar, ragga qaarkood jir ahaan "way damaan" waqtiga uurka lammaanahooda. Badanaa dareenku waa iska kumeel-gaar, waana inaan loo arag diidmo. Lammaanahaagu waxaa laga yaabaa inuu qabo walaacyo kale oo xoogaa ah iyo dareemmo isku dhafan oo ku saabsan uurka, kuwaasoo laga yaabo iney ka dhigaan inuu dhaqmo si aan kala jelcaan lahayn inyarna kuu nuglaado. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaad ku lug yeelato nolosha gudahaaga ku jirta taasoo laga yaabo inuu dareemo inaadan isaga dan u lahayn. Iskala hadla dareemmadaan.
Waxaan u baahanahay inaan galmo sameeyo, laakiin ilaa iyo markii ay uurka qaadday lammaanahaygu ma daneyneyso galmo, Tani waxay dhexdeenna ka abuurtaa xurguf. Maxaan sameyn karaa?
Mararka qaarkood haweenka way ku adag tahay iney dareemaan galmo markaasoo aysan dareensanayn inuu ku habboon yahay. U sheeg iney weli tahay mid soo jiidasho leh aadna jeceshahay iyadoo uur leh. Tan waxaa laga yaabaa iney qurux iyo xiiso ay ku dareento.
Haddii aad qabto su'aalo intaa ka badan, waad na soo weydiin kartaan.
Views: 66954 June 28, 2015, 11:26:21 AM
Views: 33744 March 30, 2011, 01:35:12 PM
Views: 16362 May 14, 2011, 10:14:27 PM
Views: 18827 July 05, 2016, 11:28:25 AM
Views: 15995 September 16, 2015, 02:20:23 PM